Beesha Caalamka oo war ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo digniin ku socoto | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Beesha Caalamka oo war ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo...
Beesha Caalamka oo war ka soo saaray xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo digniin ku socoto
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin arrimaha siyaasadeed ee dhowaan soo kordhay, oo ay ku jirto arrintii ka dhacday Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, maalintii Sabtida.
Baarlamanka ayaa sheegay inay xilka ka qaadeen Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre, kaasi oo isna saacado kadib sheegay inuu iscasilay.
Beesha Caalamka ayaa sheegtay inay rajo ka qabto inay dhacdooyinkaas aysan wiiqi doonin “dadaallada loogu jiro is-faham siyaasadeed oo wadar-ogol ah oo laga gaaro doorashooyin waqtigooda ku dhaca, oo aanay carqaladayn doonin ajendaha dib-u-habaynta Soomaaliya, ama aanay abuuri doonin xasillooni darro dib u dhac ku keeni karta guulihii ilaa iyo hadda laga gaaray arrimaha hortabinta u leh qaranka.”
Saaxiibada Soomaaliya waxay sheegeen inay si joogto ah ugu baaqayaan wadatashiyo loo dhan yahay si heshiis sal-ballaaran looga gaaro noocyada doorasho ee sannadka 2020-ka.
“Saaxiibada caalamku waxay ka filayaan in madaxda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyadu ay ixtiraamaan heshiisyadii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb 22kii Luulyo,” ayaa lagu yiri qoraalka.
“Isku-day kasta oo ka yimaada hal dhinac oo ka mid ah saamilleyda oo isku daya inuu keligiis dadka kale ku qasbo noocyo doorasho wuxuu noqon doonaa mid aan sharciyad lahayn lamana dhaqangelin karo haddii uusan helin taageerada lagama maarmaanka ah ee saamilleyda kale. Saaxiibadu waxay si dhow ula socon doonaan waxyaabaha dhici doona ee soo socda. In go’aan lagu gaaro u-heelanaanta arrimaha qaran ee hortabinta leh ee lagu heshiiyay iyo in arrimaha lagu xalliyo wadahadal iyo isu-tanaasul waxay muhiim u yihiin sii socoshada taageerada caalamiga ah ee la siiyo Soomaaliya ee heerarka hadda ay tahay,” ayaa qoraalka looga digay.